သငျ့ရဲ့အဘိုးအဘှားတှမှော စိတျပိုငျးဆိုငျရာရောဂါရှိနိုငျတဲ့ သတိပေးလက်ခဏာ (၁၂)ခု - Lifestyle Myanmar
မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျး (Dementia)ရောဂါဟာ အသကျ ၆၅နှဈကြျောလူကွီးတှမှော ဖွဈလရှေိ့တဲ့ ဦးနှောကျရောဂါတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒီရောဂါခံစားနရေသူ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ သနျး ၅၀နီးပါးရှိပွီး တဈရကျတဈရကျကို အရအေတှကျက တိုးလာနပေါတယျ။ ခနျ့မှနျးခကျြတှအေရ 2030ခုနှဈမှာ ၇၅သနျးနှငျ့ ၂၀၅၀ခုနှဈ မှာ ၁၃၁.၅သနျးကို ရောကျရှိလိမျ့မယျလို့ သိရပါတယျ။ အကွောငျးရငျးတဈခုက သူတို့ရဲ့ဆှမြေိုးသားခငျြးတှဟော အဲ့လိုဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ ဆရာဝနျနှငျ့ မတိုငျပငျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ၊ တနညျးအားဖွငျ့ ပထမရောဂါလက်ခဏာဟာ ရောဂါလုံးဝမဖှံ့ဖွိုးခငျ ၅-၁၀နှဈလောကျထဲက ပျေါပေါကျနပေါတယျ။ ဒီလိုသကျကွီးရှယျအိုတှကေို ဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေ သတိပွုမိပွီး ဆရာဝနျဆီကို ပို့ခဲ့မယျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ ပုံမှနျဘဝက ကွာရှညျနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုလူနာတှအေတှကျ ဆေးဘကျဆိုငျရာဘရိုရှာတခြို့က လလေ့ာမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီဆောငျးပါးမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ဖိုးဖိုးဖှားဖှားတှအေတှကျ သတိထားပေးရမယျ့ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျး လက်ခဏာတဈခြို့ကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
၁။ သံသယတှေ ဝငျလာတတျပါတယျ
သကျကွီးရှယျအိုမြားဟာ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျး ပွဿနာဖွဈလာရငျ သံသယတှေ ဝငျလာတတျပါတယျ။ အဖွဈအမြားဆုံး ကိစ်စကတော့ သကျကွီးရှယျအိုတဈယောကျဟာ သူတို့ဆီကနေ တဈယောကျယောကျက အရာအားလုံးကို ခိုးယူခငျြနတေယျလို့ ထငျကွပါတယျ။ တခါတလမှော ရောဂါကွောငျ့ ကိုယျ့ပစ်စညျးတှကေိုယျ အထားမှားပွီး ဘယျနားထားမိမှနျး မမှတျမိတော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပိုကျဆံ သို့ အဝတျအစားတှကေို ခိုးယူတယျဆိုပွီး သူတို့ဟာ ဆှမြေိုးသားခငျြး (သို့ )အိမျနီးခငျြးတှကေို စှပျစှဲတာမြိုး ဖွဈလာပါတယျ။ တခါတရံမှာ သူတို့ဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ဆှမြေိုးသားခငျြး (သို့) အိမျနီးခငျြးတှကေ သူ့ကို အဆိပျခပျဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့တောငျ ထငျကွပါတယျ။
ငါအကွိုကျဆုံး လကျစှပျရှာမတှဘေူ့း၊ ညညျးယူထားသေးလား?
၂။ နစေ့ဉျလုပျနကြေ အရာတှကေို စိတျဝငျစားမှု ကငျးမဲ့လာခွငျး
ဥပမာ-အဘှားဟာ ပနျးကနျတှကေို သသေခြောခြာ ဆေးတတျပွီး မနကျခငျးမှာ ကိုယျ့အိပျရာကို ခေါကျတတျတဲ့အကငျြ့ရှိပါတယျ၊ သူမဟာ ဒီလိုလုပျနကေအြရာတှကေို ရုတျတရကျ ရပျတနျ့လိုကျပါက ဒါက မကောငျးတဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါပဲ။ ဒီလက်ခဏာက နစေ့ဉျ လုပျနကြေ သာမနျအိမျမှုကိစ်စတှကေို မလုပျတတျတာ့ပဲ ခကျခဲလာခွငျး တို့ဖွဈလာပါတယျ၊ ဥပမာ- ပိုကျပေါကျနရေငျ အဘှားဟာ သူမဘာသာ သူမ မလုပျဘဲ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေို ချေါကောငျးချေါပါလိမျ့မယျ။ ဒါက လဈြလြူမရှုသငျ့တဲ့ တကယျ့ကို အရေးကွီးတဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါ။
၃။ မေးပွီးသား မေးခှနျးမြားကို ခဏခဏမေးခွငျး
ဘယျသူမဆို မလြေ့ော့နိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအခွအေနကေ မကွာခဏဖွဈတာလားဆိုတာ အာရုံစိုကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သငျ့အဘိုးအဘှားဟာ နတေို့ငျး မေးခှနျးတဈခုတညျးကို ထပျတလဲလဲမေးနရေငျ ဒါက သူမရဲ့ နောကျဆုံးအဆငျ့လို့ ဆိုလိုနိုငျတာကွောငျ့ ဆရာဝနျတဈယောကျနှငျ့ ပွသတာက အကွံကောငျးတဈခုပါ။ ကနဦးအဆငျ့မှာ လက်ခဏာတှကေ သိသိသာသာမဟုတျပါဘူး။ သူတို့ဟာ မေးခှနျးတဈခုကို ထပျတလဲလဲ မေးနိုငျပမေယျ့လညျး သူတို့ဒီမေးခှနျးကို မေးပွီးသားဖွဈကွောငျး ခကျြခငျြးသဘောပေါကျပါလိမျ့မယျ။
မွေးလေး မင်ျဂလာဆောငျ သှားမလို့လား?
၄။ အိမျပတျပတျလညျမှာ အဓိပ်ပာယျမဲ့ လမျးလြှောကျနခွေငျး
အဘိုးအဘှားတှဟော အသကျကွီးလာရငျ ငွိမျငွိမျမနဘေဲ ဟိုလုပျဒီလုပျ လြှောကျလုပျတတျပါတယျ။။ အသကျကွီးသူတဈယောကျဟာ အိမျပတျပတျလညျမှာ လမျးလြှောကျနတော၊ ပစ်စညျးတှကေို ဟိုကိုငျဒီကိုငျနဲ့ ပွနျလညျစီရီနတောဟာ သူတို့တဈခုခု အလုပျမြားနတောလို့ သငျထငျပါလိမျ့မယျ။ သငျ့စကားကိုသူကွားလား၊ ဒါမှမဟုတျ ဇဝဇေဝါဖွဈနသေလားဆိုတာ သိရဖို့ သူတို့လမျးလြှောကျနစေဉျအတှငျး မှာ မေးခှနျးတဈခုကို မေးကွညျ့လိုကျပါ။
ပစ်စညျးတှကေို ပွနျလညျစီရီခွငျးက အဖွဈမြားတဲ့ အပွုအမှုတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ- စာအုပျပုံတဈပုံကို အခနျးတဈခုကနေ တဈခနျးသို့ နတေို့ငျးရှနေ့ခွေငျးတို့ ပွုလုပျတတျပါတယျ။ သူ့မှာအရငျထဲက ဒီလိုအကငျြ့ရှိလား? အသကျကွီးမှ ဖွဈလာတာလားဆိုတာ သတိထားပေးပွီး ဒါက အစောပိုငျး မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျး လက်ခဏာ ဟုတျမဟုတျဆိုတာ စဈဆေးဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
၅။ ကိုယျအမူအယာ ၊အကငျြ့စရိုကျနှငျ့ စိတျခံစားမှု ပွောငျးလဲလာခွငျး
ဒါက နဂိုကတညျးက ဒီအမူအကငျြ့စရိုကျရှိတာလား၊ အသကျကွီးလို့ဖွဈတဲ့ လက်ခဏာလားဆိုတာ မရောထှေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးတဲ့ လူတှမှော တခြို့အမူအကငျြ့တှကေ အမှနျရှိတာထကျပိုပွီး ခြဲ့ကားပွောဆိုတတျပါတယျ။ နဂိုတညျးက လောဘရှိသူ ၊ကပျစေးနှဲသူ တဈယောကျဆိုလြှငျ တဈကပျြ၊ တဈပွားကအစ ပိုကျဆံတှကေို စုဆောငျးတာ၊ ဖှကျထားတာတှေ စတငျပွုလုပျလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီပွောငျးလဲမှုက တဖွညျးဖွညျးခငျြး ဖွဈပျေါတာကွောငျ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေ သူတို့အဘိုးအဘှားဟာ ပိုပွီးစိတျတိုလှယျလာတယျလို့ပဲ ထငျကွပါတယျ။
၆။ အခြိနျတှကေို မမှတျမိဘဲ ဝဝေါးနခွေငျး
ဆှမြေိုးသားခငျြးတှတေောငျ ဒီလက်ခဏာကို သတိမပွုမိတတျပါဘူး။ သကျကွီးရှယျအိုတဈဦးအတှကျ ရကျစှဲတှကေို မှတျမိဖို့ ခကျခဲပါတယျ၊ တခါတရံမှာ သူတို့ဟာ ရောကျရှိနတေဲ့ အခြိနျကို ပွောပွဖို့တောငျ ခကျခဲလာပွီး အခြိနျဘယျလောကျမြားမြား ကြျောဖွတျခဲ့ပွီဆိုတာကို နားလညျဖို့ ခကျခဲနိုငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ တဈနာရီမှာ လမျးလြှောကျထှကျပွီး ၁၅မိနဈ သို ၃နာရီမှာ အိမျပွနျလာတယျဆိုပါစို့ အခြိနျဘယျလောကျပဲ ကုနျသှားပါစေ၊ သူတို့ဟာ မိနဈ ၆၀ပဲ သှားခဲ့တယျလို့ ထငျပါလိမျ့မယျ။
၇။ အမှိုကျတှကေို စုဆောငျးလာခွငျး
ဒါကတော့ လက်ခဏာ တဈခုနဲ့တဈခု တူမှာမဟုတျပါဘူး။ အရငျထဲက လောဘကွီးတတျတဲ့သူဆိုရငျ ပစ်စညျးအဟောငျး ၊ အစုတျအပွတျကအစ စုဆောငျးတတျပွီး အဲ့ဒါတှကေို လှငျ့ပဈဖို့ပွောရငျ ငွငျးဆနျပါလိမျ့မယျ။ တခြို့တှကေ ကွောငျရုပျ၊ ခှေးရုပျလေးတှေ၊ လကျသုတျပုဝါတှေ စတဲ့အသုံးမဝငျသော ပစ်စညျးတှကေို စုဆောငျးတတျပါတယျ။
၈။ လကျတှကေ့တြဲ့ အစီအစဉျမြားကို ပွုလုပျနိုငျစှမျးမရှိခွငျး
လူတဈယောကျမှာ မဖွဈနိုငျတဲ့အရာတှနှေငျ့ ပတျသတျပွီး အိမျမကျတှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ- သူတို့ဟာ ဧဝရကျတောငျထိပျကို တတျခငျြတာမြိုး၊(သူတို့မှာ ပိုကျဆံအမြားကွီး မရှိလြှငျတောငျ) ပငျလယျနားက စြေးအရမျးကွီးတဲ့ အိမျတဈလုံးကို ဝယျခငျြတာမြိုး ဆိုတတျကွပါတယျ။
၉။ ရုတျတရကျ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးလာခွငျး (သို့ )လြော့လာခွငျး
ကိုရီးယားသိပ်ပံပုညာရှငျမြားက ကိုယျအလေးခြိနျပွောငျးလဲမှုမြားက (Dementia)အသိဉာဏျထိခိုကျခြို့ယှငျးခွငျးနှငျ့အတူ ဆကျနှယျနကွေောငျး ၊ဒီပွောငျးလဲမှုမြားက သိသာထငျရှားမှုမရှိကွောငျး ယူဆကွပါတယျ၊
ရုတျတရကျ ကိုယျအလေးခြိနျ ၁၀ရာခိုငျနှုနျးတတျသှားတဲ့ အမြိုးသားမှာ dementia (မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးမှု) အန်တရာယျ ၂၅ရာခိုငျနှုနျး တိုးလာပွီး တူညီတဲ့အခွအေနမှော အမြိုးသမီးမှာဆိုရငျ ၁၇ ရာခိုငျနှုနျး တိုးလာတယျလို့ ထညျ့သှငျးစဉျးစားကွပါတယျ။
ဒါက အစောပိုငျးလက်ခဏာမြားထဲက တဈခုဖွဈပမေယျ့ ဒါက ကငျဆာ သို့ နှလုံးပွဿနာမြားကဲ့သို့ တခွားရောဂါတခြို့မှာလညျး ညှနျပွနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
၁၀။ တဈခုခုလုပျနိုငျစှမျးမရှိတဲ့အခါ စိတျပကျြဝမျးနညျးခွငျး
ဒါက ကိုယျ့မှာ တဈခုခုဖွဈနပွေီဆိုတာ သဘောပေါကျတဲ့အဆငျ့နှငျ့ တူပါတယျ။ သကျကွီးရှယျအို ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဟာ ကိုယျဘယျလို ထူးဆနျးတဲ့ စရိုကျလက်ခဏာ ဖွဈနတေယျဆိုတာ သတိထားမိပွီး စတငျ စိတျပကျြလာပါလိမျ့မယျ။ တဈခုခု ကကြှဲသှားတဲ့အခါ ဥပမာ- ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့သူကို ချေါနိုငျစှမျးမရှိဘဲ ဒီပွဿနာကို တခွားလူ ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲဆိုတာတောငျ မသိတော့ပါဘူး။ ဒီဖွဈစဉျတှမှော မကမြေနပျပွောတာ၊ ငိုတာတှေ ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။
၁၁။ အထီးကနျြစဖေို့ လှုံဆျောမှု ဖွဈလာပါတယျ
သကျကွီးရှယျအိုမြားဟာ သူတို့ကိုယျသူတို့ ပွောငျးလဲခွငျးတှကေို စတငျသတိပွုမိတဲ့အခါ တခွားသူတှကေို မရညျရှယျဘဲ စတငျရှောငျလာပါတယျ။ ဒါက စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေး တဈခုနှငျ့တူတဲ့ အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ ဒီကမ်ဘာကွီးဟာ သူတို့နဲ့ ရုတျတရကျ လုံးဝအကြှမျးတဝငျမရှိသော အဖွဈကို ပွောငျးလဲသှားမှာ ကွောကျကွပါတယျ။ မိသားစု တဈစုတဈစညျးတဲ့ ရှိနတေဲ့အခါမြိုးမှာ ထိုပုဂ်ဂိုလျဟာ အမွဲတမျး တပဈြတောကျတောကျပွောပွီး သူတို့ရဲ့ မကနြေပျမှုတှကေို ပွသပါလိမျ့မယျ။ တကယျတော့ ဒါက လူမှုရေးတတျကွှပွီး ဖျောရှနေကေဖြွဈတဲ့ သူတှမှောသာ ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။
၁၂။ စကားလုံးရှာမရဘဲ စကားစမြား ပွတျတောကျကုနျခွငျး
ဒါက လူတဈယောကျရဲ့ တတျကွှသော ဝေါဟာရတှကေို ကဉျြးမွောငျးသှားကွောငျး ဖျောပွနပေါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ ဒီ featureက ကြောငျးဆရာ သို့ သိပ်ပံပညာရှငျဖွဈခဲ့သူတှေ၊ အမြားကွီး ဖတျရှုလလေ့ာခဲ့သူတှနှေငျ့ သကျဆိုငျပါတယျ။ အခြိနျကြျောလှနျလာတာနဲ့အမြှ သူတို့ဟာ အသံထှကျ ခကျခဲတဲ့ စကားလုံးတှေ၊ မတူညီတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှေ အသုံးပွုခွငျးကို ရပျတနျ့သှားပါတယျ။ စကားပွောနရေငျးခတ်ေတရပျသှားပွီး “ဟိုဟာလေ၊ ဟိုလေ…”ဆိုတဲ့ အဖွညျ့စကားလုံးတှေ၊ အာမဍေိတျပွစကားလုံးတှေ သုံးလာပါတယျ။
စာအုပျတှဖေတျခွငျးကိုလညျး စိတျဝငျစားမှုနညျးလာပါတယျ။ သူတို့ဟာ လူသုံးနညျးတဲ့ စကားလုံးတှေ၊ ရှညျလြားတဲ့စာတှကေို ဖတျဖို့ ခကျခဲလာပါတယျ။ သူတို့ ဒီလိုကွုံတှရေတဲ့အခါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ နားမလညျတာကွောငျ့ သူတို့ဟာ စိတျဘဝငျမကမြှုကို ခံစားကွရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ဟာ ဉာဏျအားစိုကျရတဲ့အလုပျကို ကြျောပွီး စိတျငွိမျးခမျြးမှုကိုသာ လိုလားကွပါတယျ။
dementia လို့သတျမှတျနိုငျတဲ့ စမျးသပျမှုတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ နာမညျအကွီးဆုံးက 6CIT, SAGE နှငျ့ MMSE တို့ဖွဈပါတယျ။ စမျးသပျမှုတဈခုစီမှာ မေးခှနျးအနညျးငယစီပါဝငျပွီး လူတဈယောကျမှာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာရောဂါ သို့ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးမှုရောဂါ ခံစားနရေလြှငျ ရှာတှဖေို့ ကူညီနိုငျပါတယျ။
သကျကွီးရှယျအိုတဈယောကျကို အောကျပါစမျးသပျမှုတှေ ပွသကွညျ့ပါ။ သူတို့ကို ဖွညျ့စှကျဖို့ ၁၅မိနဈပေးပါ။ မေးခှနျးတဈဝကျကိုသာ ဖွနေိုငျလြှငျ သူတို့မှာ cognitive ပွဿနာရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဆရာဝနျတဈယောကျနှငျ့ သှားပွတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ သငျ့ရဲ့ သကျကွီးရှယျအိုဆှမြေိုးသားခငျြးတှရေဲ့ အပွုအမှုကို သတိထားပေးဖို့ အကွံပွုလိုပါတယျ။
သင့်ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါရှိနိုင်တဲ့ သတိပေးလက္ခဏာ (၁၂)ခု
မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း (Dementia)ရောဂါဟာ အသက် ၆၅နှစ်ကျော်လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဦးနှောက်ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါခံစားနေရသူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ သန်း ၅၀နီးပါးရှိပြီး တစ်ရက်တစ်ရက်ကို အရေအတွက်က တိုးလာနေပါတယ်။ ခန့်မှန်းချက်တွေအရ 2030ခုနှစ်မှာ ၇၅သန်းနှင့် ၂၀၅၀ခုနှစ် မှာ ၁၃၁.၅သန်းကို ရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်နှင့် မတိုင်ပင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် ပထမရောဂါလက္ခဏာဟာ ရောဂါလုံးဝမဖွံ့ဖြိုးခင် ၅-၁၀နှစ်လောက်ထဲက ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ ဒီလိုသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက သတိပြုမိပြီး ဆရာဝန်ဆီကို ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်ဘဝက ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုလူနာတွေအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘရိုရှာတချို့က လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေအတွက် သတိထားပေးရမယ့် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း လက္ခဏာတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သံသယတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်
သက်ကြီးရွယ်အိုများဟာ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း ပြဿနာဖြစ်လာရင် သံသယတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး ကိစ္စကတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ဆီကနေ တစ်ယောက်ယောက်က အရာအားလုံးကို ခိုးယူချင်နေတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ ရောဂါကြောင့် ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကိုယ် အထားမှားပြီး ဘယ်နားထားမိမှန်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံ သို့ အဝတ်အစားတွေကို ခိုးယူတယ်ဆိုပြီး သူတို့ဟာ ဆွေမျိုးသားချင်း (သို့ )အိမ်နီးချင်းတွေကို စွပ်စွဲတာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ တခါတရံမှာ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း (သို့) အိမ်နီးချင်းတွေက သူ့ကို အဆိပ်ခပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင် ထင်ကြပါတယ်။
ငါအကြိုက်ဆုံး လက်စွပ်ရှာမတွေ့ဘူး၊ ညည်းယူထားသေးလား?
၂။ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အရာတွေကို စိတ်ဝင်စားမှု ကင်းမဲ့လာခြင်း
ဥပမာ-အဘွားဟာ ပန်းကန်တွေကို သေသေချာချာ ဆေးတတ်ပြီး မနက်ခင်းမှာ ကိုယ့်အိပ်ရာကို ခေါက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်၊ သူမဟာ ဒီလိုလုပ်နေကျအရာတွေကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်ပါက ဒါက မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလက္ခဏာက နေ့စဉ် လုပ်နေကျ သာမန်အိမ်မှုကိစ္စတွေကို မလုပ်တတ်တာ့ပဲ ခက်ခဲလာခြင်း တို့ဖြစ်လာပါတယ်၊ ဥပမာ- ပိုက်ပေါက်နေရင် အဘွားဟာ သူမဘာသာ သူမ မလုပ်ဘဲ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ခေါ်ကောင်းခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက လျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့ တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။
၃။ မေးပြီးသား မေးခွန်းများကို ခဏခဏမေးခြင်း
ဘယ်သူမဆို မေ့လျော့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေက မကြာခဏဖြစ်တာလားဆိုတာ အာရုံစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အဘိုးအဘွားဟာ နေ့တိုင်း မေးခွန်းတစ်ခုတည်းကို ထပ်တလဲလဲမေးနေရင် ဒါက သူမရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်လို့ ဆိုလိုနိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်နှင့် ပြသတာက အကြံကောင်းတစ်ခုပါ။ ကနဦးအဆင့်မှာ လက္ခဏာတွေက သိသိသာသာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ မေးခွန်းတစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲ မေးနိုင်ပေမယ့်လည်း သူတို့ဒီမေးခွန်းကို မေးပြီးသားဖြစ်ကြောင်း ချက်ချင်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
မြေးလေး မင်္ဂလာဆောင် သွားမလို့လား?
၄။ အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ လမ်းလျှောက်နေခြင်း
အဘိုးအဘွားတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် ငြိမ်ငြိမ်မနေဘဲ ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လျှောက်လုပ်တတ်ပါတယ်။။ အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာ လမ်းလျှောက်နေတာ၊ ပစ္စည်းတွေကို ဟိုကိုင်ဒီကိုင်နဲ့ ပြန်လည်စီရီနေတာဟာ သူတို့တစ်ခုခု အလုပ်များနေတာလို့ သင်ထင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်စကားကိုသူကြားလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသလားဆိုတာ သိရဖို့ သူတို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်း မှာ မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးကြည့်လိုက်ပါ။
ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်စီရီခြင်းက အဖြစ်များတဲ့ အပြုအမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- စာအုပ်ပုံတစ်ပုံကို အခန်းတစ်ခုကနေ တစ်ခန်းသို့ နေ့တိုင်းရွေ့နေခြင်းတို့ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ သူ့မှာအရင်ထဲက ဒီလိုအကျင့်ရှိလား? အသက်ကြီးမှ ဖြစ်လာတာလားဆိုတာ သတိထားပေးပြီး ဒါက အစောပိုင်း မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း လက္ခဏာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
၅။ ကိုယ်အမူအယာ ၊အကျင့်စရိုက်နှင့် စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲလာခြင်း
ဒါက နဂိုကတည်းက ဒီအမူအကျင့်စရိုက်ရှိတာလား၊ အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာလားဆိုတာ မရောထွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းတဲ့ လူတွေမှာ တချို့အမူအကျင့်တွေက အမှန်ရှိတာထက်ပိုပြီး ချဲ့ကားပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ နဂိုတည်းက လောဘရှိသူ ၊ကပ်စေးနှဲသူ တစ်ယောက်ဆိုလျှင် တစ်ကျပ်၊ တစ်ပြားကအစ ပိုက်ဆံတွေကို စုဆောင်းတာ၊ ဖွက်ထားတာတွေ စတင်ပြုလုပ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပြောင်းလဲမှုက တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်ပေါ်တာကြောင့် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက သူတို့အဘိုးအဘွားဟာ ပိုပြီးစိတ်တိုလွယ်လာတယ်လို့ပဲ ထင်ကြပါတယ်။
၆။ အချိန်တွေကို မမှတ်မိဘဲ ဝေဝါးနေခြင်း
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတောင် ဒီလက္ခဏာကို သတိမပြုမိတတ်ပါဘူး။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးအတွက် ရက်စွဲတွေကို မှတ်မိဖို့ ခက်ခဲပါတယ်၊ တခါတရံမှာ သူတို့ဟာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အချိန်ကို ပြောပြဖို့တောင် ခက်ခဲလာပြီး အချိန်ဘယ်လောက်များများ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်နာရီမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီး ၁၅မိနစ် သို ၃နာရီမှာ အိမ်ပြန်လာတယ်ဆိုပါစို့ အချိန်ဘယ်လောက်ပဲ ကုန်သွားပါစေ၊ သူတို့ဟာ မိနစ် ၆၀ပဲ သွားခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။
၇။ အမှိုက်တွေကို စုဆောင်းလာခြင်း
ဒါကတော့ လက္ခဏာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ထဲက လောဘကြီးတတ်တဲ့သူဆိုရင် ပစ္စည်းအဟောင်း ၊ အစုတ်အပြတ်ကအစ စုဆောင်းတတ်ပြီး အဲ့ဒါတွေကို လွှင့်ပစ်ဖို့ပြောရင် ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့တွေက ကြောင်ရုပ်၊ ခွေးရုပ်လေးတွေ၊ လက်သုတ်ပုဝါတွေ စတဲ့အသုံးမဝင်သော ပစ္စည်းတွေကို စုဆောင်းတတ်ပါတယ်။
၈။ လက်တွေ့ကျတဲ့ အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
လူတစ်ယောက်မှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အိမ်မက်တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ- သူတို့ဟာ ဧဝရက်တောင်ထိပ်ကို တတ်ချင်တာမျိုး၊(သူတို့မှာ ပိုက်ဆံအများကြီး မရှိလျှင်တောင်) ပင်လယ်နားက ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို ဝယ်ချင်တာမျိုး ဆိုတတ်ကြပါတယ်။
၉။ ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း (သို့ )လျော့လာခြင်း
ကိုရီးယားသိပ္ပံပုညာရှင်များက ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများက (Dementia)အသိဉာဏ်ထိခိုက်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်နေကြောင်း ၊ဒီပြောင်းလဲမှုများက သိသာထင်ရှားမှုမရှိကြောင်း ယူဆကြပါတယ်၊
ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ရာခိုင်နှုန်းတတ်သွားတဲ့ အမျိုးသားမှာ dementia (မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှု) အန္တရာယ် ၂၅ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပြီး တူညီတဲ့အခြေအနေမှာ အမျိုးသမီးမှာဆိုရင် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာတယ်လို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါတယ်။
ဒါက အစောပိုင်းလက္ခဏာများထဲက တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒါက ကင်ဆာ သို့ နှလုံးပြဿနာများကဲ့သို့ တခြားရောဂါတချို့မှာလည်း ညွန်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်နှင့် ပြသဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
၁၀။ တစ်ခုခုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အခါ စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းခြင်း
ဒါက ကိုယ့်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာ သဘောပေါက်တဲ့အဆင့်နှင့် တူပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဘယ်လို ထူးဆန်းတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိပြီး စတင် စိတ်ပျက်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခု ကျကွဲသွားတဲ့အခါ ဥပမာ- ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူကို ခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ဒီပြဿနာကို တခြားလူ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာ မကျေမနပ်ပြောတာ၊ ငိုတာတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ အထီးကျန်စေဖို့ လှုံဆော်မှု ဖြစ်လာပါတယ်
သက်ကြီးရွယ်အိုများဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေကို စတင်သတိပြုမိတဲ့အခါ တခြားသူတွေကို မရည်ရွယ်ဘဲ စတင်ရှောင်လာပါတယ်။ ဒါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး တစ်ခုနှင့်တူတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ သူတို့နဲ့ ရုတ်တရက် လုံးဝအကျွမ်းတဝင်မရှိသော အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။ မိသားစု တစ်စုတစ်စည်းတဲ့ ရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အမြဲတမ်း တပျစ်တောက်တောက်ပြောပြီး သူတို့ရဲ့ မကျေနပ်မှုတွေကို ပြသပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဒါက လူမှုရေးတတ်ကြွပြီး ဖော်ရွေနေကျဖြစ်တဲ့ သူတွေမှာသာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
၁၂။ စကားလုံးရှာမရဘဲ စကားစများ ပြတ်တောက်ကုန်ခြင်း
ဒါက လူတစ်ယောက်ရဲ့ တတ်ကြွသော ဝေါဟာရတွေကို ကျဉ်းမြောင်းသွားကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဒီ featureက ကျောင်းဆရာ သို့ သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေ၊ အများကြီး ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သူတွေနှင့် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကျော်လွန်လာတာနဲ့အမျှ သူတို့ဟာ အသံထွက် ခက်ခဲတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ မတူညီတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ စကားပြောနေရင်းခေတ္တရပ်သွားပြီး “ဟိုဟာလေ၊ ဟိုလေ…”ဆိုတဲ့ အဖြည့်စကားလုံးတွေ၊ အာမေဍိတ်ပြစကားလုံးတွေ သုံးလာပါတယ်။
စာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူသုံးနည်းတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ ရှည်လျားတဲ့စာတွေကို ဖတ်ဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။ သူတို့ ဒီလိုကြုံတွေရတဲ့အခါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ နားမလည်တာကြောင့် သူတို့ဟာ စိတ်ဘဝင်မကျမှုကို ခံစားကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ ဉာဏ်အားစိုက်ရတဲ့အလုပ်ကို ကျော်ပြီး စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသာ လိုလားကြပါတယ်။
dementia လို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နာမည်အကြီးဆုံးက 6CIT, SAGE နှင့် MMSE တို့ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီမှာ မေးခွန်းအနည်းငယစီပါဝင်ပြီး လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ သို့ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုရောဂါ ခံစားနေရလျှင် ရှာတွေ့ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ကို အောက်ပါစမ်းသပ်မှုတွေ ပြသကြည့်ပါ။ သူတို့ကို ဖြည့်စွက်ဖို့ ၁၅မိနစ်ပေးပါ။ မေးခွန်းတစ်ဝက်ကိုသာ ဖြေနိုင်လျှင် သူတို့မှာ cognitive ပြဿနာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နှင့် သွားပြတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ အပြုအမှုကို သတိထားပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။